IYunivesithi yaseSt. John, i-SAT ne-ACT
IYunivesithi yaseSt. John, i-SAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi yaseSt. John yaseNew York GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Okwazisa ukuba wamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
IYunivesithi yaseSt. John e-New York iyunivesithi yamaKatolika ekhethekileyo evuma ngokumalunga nesibini kwisithathu sabo bonke abafake izicelo. Ukuze ubone indlela olinganisa ngayo kwiyunivesiti, ungasebenzisa le sixhobo samahhala ukusuka eKappex ukuba ubale amathuba akho wokungena.
Ingxoxo yeState John's University's Admissions Standards:
Ukungena kwiYunivesithi yaseSt. John uya kufuna ama-grade ephakamileyo aphezulu, kwaye amanqaku angama-standard standard aphezulu anokuncedisa isicelo sakho (eyunivesithi ngoku i-test-optional, ngoko ke izikolo ze-SAT kunye ne-ACT ayifuni). Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba abafaki-zicelo abaninzi abaphumeleleyo banamabanga aphakamileyo aphakamileyo e-B-okanye aphezulu, ahlanganiselwe ama-SAT amanqaku angama-1000 okanye ngaphezulu, kunye ne-ACT amanqaku amanqaku angama-20 okanye angcono. Inxalenye ebalulekileyo yabafundi abavunyelweyo yayinomlinganiselo kwi-"A".
Qhubeka ukhumbule ukuba amabakala kunye namanqaku okuhlola asemgangathweni awawodwa kuphela amanyathelo acatshangelwe ukuba angeniswe kwiYunivesithi yaseSt. Oku kuchaza ukuba kukho ukungafihli phakathi kwabafundi abathandekayo nabamkelweyo kwinqanaba legrafu. Abanye abafundi abakujoliswe ekujoliseni ukuba bangeniswe kwiSt. John bangangeni, ngelixa abanye abangaphantsi kwesi siqhelo bayavunywa.
Isicelo seyunivesithi siquka ulwazi malunga nemisebenzi yakho yangaphandle , uludwe lweentlonelo kunye nesicatshulwa somntu wamazwi angama-650 okanye ambalwa. Kungakhathaliseki ukuba usebenzisa isicelo esiqhelekileyo okanye isicelo seSt. John, incoko ayifuni, kodwa kuyanconywa. Abafakizicelo abanamabanga amanqanaba kunye / okanye amanqaku okuvavanya bekuya kubulumko ukuba babhale isicatshulwa-kunceda abasebenzi abamkeleyo ukuba bazi kangcono, kwaye kukunika ithuba lokubaxelela okuthile malunga nawe ukuba kungabonakali kwamanye amazwe sakho sicelo. Kubafundi abakhetha ukungenise izikolo ze-SAT okanye ze-ACT, isicatshulwa kubaluleke ngakumbi ekuncediseni ukubonisa iimfuno zakho, ukulangazelela kunye nokulungelelaniswa kweekholeji.
Kwakhona kubalulekile ukukhumbula ukuba nangona iSt. John uvavanyo-ngokukhethekileyo kubafaki-zicelo abaninzi, iimvavanyo zokuvavanywa zifunekayo kubafundi abafundele ekhaya, abadlali bezemidlalo, abafakizicelo bezizwe ngezizwe, kunye nabani na abafundi abafuna ukucatshungulwa kwi-full-tuition Scholarship yoMongameli. Uya kufumanisa ukuba iiprogram ezimbalwa kwiSt. John zineemfuno ezongezelelweyo zezicelo kuquka ukufakwa kwamanqaku okuvavanya.
Ukuze ufunde okungakumbi ngeYunivesithi yaseSt. John kuquka nesantya sokwamkelwa kwesikolo, izinga lokugqweswa kweziqu, iindleko, kunye nedatha yenkxaso-mali, qi niseka ukuba uhlole iProfayili yase - St. John's Admitted Profile .
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseSt. John, Uyakwazi kwakhona ezi zikolo:
Ukuba ufuna iyunivesithi yangasese kwindawo yaseNew York, ezinye iindlela ziquka iNyuvesi yaseNew York, iYunivesithi yePace , kunye neHofstra University . Ezinye izikolo ezifake izicelo kwiYunivesithi yaseSt. John ziye zathanda iSyunivesithi yeYunivesithi , iKholeji yaseBharuki neSyunivesithi yaseYurophu . Ukuba i-yunivesithi kunye ne-mission ye-yunivesithi ikubhenela kuwe, qiniseka ukuqwalasela ezi kholeji zaseKatolika eziphezulu nakwiiUnited States.
I-Vassar GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
'Phakamisa iYew' - Imvelaphi ye 'Intso'
UJohn Burns, iGosa lamaKhosi laseGettysburg
Kutheni iNingizimu Afrika inezixeko ezinkulu?
Yintoni yokugqoka iVictoria Mountain Biking
Ukulinganisa i-Chakra Bath
Imithandazo yeBhedtime yoBantwana
Izixhumo ezilishumi elinambini zeNkxaso
Indlela yokusebenzisa ngokungafaniyo kwipayipi